Kwimizuzu engama-20 ukuya eSalzburg! Indlu yanamhlanje - indawo ephezulu
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguDominique
Indlu yonke kuwe wedwa. Inamagumbi okulala ama-3 (iibhedi ezi-5 zizonke ezikhoyo), igumbi lokuhlambela, indawo yokuhlala kunye neyokutyela kunye negadi enkulu.
Xa uhlala kule ndawo yokuhlala isembindini, usapho lwakho luya kuba nayo yonke into oluyidingayo kufutshane. Isikhululo sikaloliwe, isikhululo segesi, ivenkile enkulu, ikhemesti, iindawo zokutyela - zonke ezikufutshane!
Yimizuzu engama-20 kuphela ukusuka kwisixeko saseSalzburg
ASIVUMELI IMIQATHA ENDLINI YETHU!!!!!!
Igumbi lokuhlala eliphangaleleyo elinekhitshi langoku, izitulo zebhari, indawo yokutyela ephangaleleyo kunye negumbi lokuhlala elipholileyo elibandakanya iTV (iNetflix kunye neAmazon Prime) imema ukuba uhlale.
65" HDTV ene-I-Netflix, I-Amazon Prime Video
I-Silent Night Chapel, iCawe kaJosef Mohr, uloliwe wasekhaya, ivenkile enkulu, kufutshane neBavaria/eJamani, imbonakalo-mhlaba eyohlukeneyo yechibi, imbonakalo entle yomhlaba, indawo engqongileyo ilulungele kakuhle ukhenketho lokuhamba ngebhayisekile.
Sinokufikelelwa ziindwendwe zethu nangaliphi na ixesha ngefowuni, WhatsApp, SMS okanye e-mail.